‘ब्राण्डेड समर वेयरको’ व्यापार शुरू | गृहपृष्ठ
Home बजार ‘ब्राण्डेड समर वेयरको’ व्यापार शुरू
‘ब्राण्डेड समर वेयरको’ व्यापार शुरू
चैत १२, काठमाडौं । जाडो मौसमको अन्त्यसँगै ‘ब्राण्डेड समर वेयरको’ व्यापार शुरू भएको छ । चैत महीनाको शुरुआतसँगै गर्मीमा लगाउने टिसर्ट, हाफसर्ट, मोजा, समर ज्याकेट, स्याण्डल, पाइण्ट, लेगेन्स, वानपिसलगायत पोशाकको व्यापार बढ्दै गएको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउछँन् । ‘नेपाली बजारमा चैत महीनको आगमनसँगै समर वेयरको विक्री शुरू हुने गरेको छ,’ दरबारमार्ग स्थित द पूमा स्टोरका प्रबन्धक राम श्रेष्ठले भने । अहिले नेपाली बजारमा नयाँनयाँ डिजाइनका समर वेयरहरू भित्रिरहेकासमेत उनले बताए ।
बजारमा माग बढ्न थालेपछि द पूमा स्टोरले समर वेयर आयात गर्ने तयरी गरेको छ । ‘अहिलेसम्म जाडोकै पोशाकहरू विक्री गरिहेका छौ, अब यहीँ साता समर वेयर ल्याउने तयारी गरेका छौ’ प्रबन्धक श्रेष्ठले भने । ग्राहकको मागअनुसार नयाँनयाँ डिजाइनका टिसर्ट, हाफसर्ट, ट्रयाकसुट, समर ज्याकेट, मोजालगायत पोशाक ल्याइने पूमा स्टोरले बताएको छ । द पूमा स्टोर नेपालका लागि पूमाको आधिकारिक विक्रेता हो । यसले नेपाली बजारमा विगत डेढ वर्षदेखि पूमा ब्राण्डका पोशाक तथा खेलकूदका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै पूमा ब्राण्डका पोशाकप्रति ग्राहकको आकर्षण बढेकाले समर वेयरको विक्री २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रबन्धक श्रेष्ठको दाबी छ ।
विशेषगरी समर वेयरको विक्री वैशाखको शुरूसँगै हुने गरेको छ । तर, यसपालि भने चैतदेखि नै यस्ता पोशाकको विक्री शुरू भएको न्यूरोड धर्मपथस्थित ह्वाइट फेदरका कवीन्द्र वज्राचार्यले बताए । ‘गर्मी बढेकाले यसपालि समर वेयरको विक्री छिट्टै शुरू भएको हो’ उनले भने । ह्वाइट फेदरले अहिले टिसर्ट, हाफसर्ट, लेगेन्स, वानपिस, मोजा, चप्पललगायत समर वेयरहरू विक्री भइरहेको बताएको छ ।
ब्राण्डप्रति ग्राहकको आकर्षण बढेकाले ब्राण्डेड समर वेयरको व्यापार पनि वृद्धि हुने सुपरभाइजर वज्राचार्यले बताए । गतवर्ष दैनिक ६ देखि ७ हजार रुपैयाँबराबरको समर वेयर विक्री भएको थियो । यस वर्षभने गर्मीको शुरुआतमै दैनिक ४ देखि ५ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरका समर वेयरको विक्री भएको उनले बताए । ह्वाइट फेदरले लिभाइज, अर्मानी, डी एण्ड जीलगायत ब्राण्डका पोशाकको विक्री गर्दै आएको छ ।
दरबारमार्ग शेर्पा मलस्थित न्यू लेबल्समा पनि समर वेयरको विक्री शुरू भइसकेको छ । समर वेयरको विक्री विशेषगरी वैशाखमा हुने भए पनि टिसर्ट तथा हाफसर्टलागयत पोशाकको माग भने बढिरहेको न्यू लेबल्सकी विक्री प्रबन्धक विना स्थापितले बताइन् । ‘हामीले अहिले पेपे ब्राण्डका टिसर्टलगायत समर वेयरको विक्री गरिरहेका छौ, अन्य ब्राण्डका समर वेयरहरू पनि छिट्टै ल्याउने छौ’ स्थापितले भनिन् ।
न्यू लेबल्सले लिभाइज, पेपे, ⋲याङटनलगायत ब्राण्डका पोशाकहरूको विक्री गर्दै आएको छ । सबै उमेर समूह र लिङ्गका ग्राहकका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ब्राण्डेड वेयरहरू यहाँ उपलब्ध रहेको विक्री प्रबन्धक स्थापितको दाबी छ । मानिसमा ब्राण्डप्रति बढेको चेतना तथा ब्राण्डेड सामान प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धाले ब्राण्डेड समर वेयरको व्यापार ७० प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने न्यू लेबल्सले बताएको छ ।
जाडो सिजनको अन्त्य र गर्मी मौसमको शुरुआतसँगै कटन, सुती तथा सिल्कजन्य कपडाको व्यापार बढेको छ । राजधानीस्थित अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका स्टोरदेखि सानाठूला सबै फेशन स्टोरमा समेत समर वेयरको व्यापार बढ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेता एवम् सभासद्हरू जलविहारमा
चैत १२, धादिङ (अस) । नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ को अवसरमा त्रिशुली नदीमा शनिवार आयोजना गरिएको जलयात्रा महोत्सवमा विभिन्न पार्टीका उच्च तहका नेताहरू र सयौं सभासद् सहभागी भए । साहसिक जलयात्रा (र्याफि्टङ) सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले नेकपा एमाले, पर्यटन इलाका कमिटी, धादिङद्वारा आयोजित सो जलयात्रा महोत्सवमा विभिन्न पार्टीका नेता, सभासद्हरू र सवसाधारण गरी करीब ६ सयको सहभागिता थियो ।
जलयात्रामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, पोलिटब्यूरो सदस्य केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पशुपति चौलागाईं, एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेपाली काङ्ग्रेसका १०/१० जना केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरू सहभागी थिए । उनीहरूले पालैपालो धादिङको चरौंदीदेखि कुरिनटारसम्म करीब १८ किलोमिटर जलयात्रा गरे । कार्यक्रमलाई एशियन एडभेञ्चर र इको एडभेञ्चरले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो । नेता तथा सभासद्हरू जलयात्रा गरेको दृश्य हेर्न दर्शकहरूको त्रिशुली किनारमा घुँइचो लागेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले काठमाडौंको स्काउट भवनमा उद्घाटन गरेका थिए । त्रिशुली नदीमा एकैपटक यति धेरै सङ्ख्यामा मानिस र्याफि्टङमा सहभागी भएको यो दोस्रोपटक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
सेण्ट्रल बिजनेश पार्कको भूमिपूजा
चैत १२, काठमाडौं (अस)। सेण्ट्रल बिजनेश पार्कको शनिवार भूमिपूजा गरिएको छ । पार्क निर्माणस्थल थापाथलीमा पूजा गरिएको हो । ५ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको पार्क १० तलाको हुनेछ । पार्क क्लिन डेभलपस ग्रूपले क्लिन इनर्जी डेभलपमेण्ट बैङ्कको वित्तीय सहयोगमा बनाउन लागेको हो । यसको डिजाइन आरएसपी आर्किटेक ग्रूप सिङ्गापुरले गरेको हो । पार्कको निर्माण १८ महीना भित्र सकिने बताइएको छ । सेण्ट्रल पार्क हाउजिङ विशालनगरको सफलतापछि क्लिन डिभलपसले बिजनेश पार्कको निर्माण गर्न लागेको हो । सो अवसरमा बोल्दै डेपलपसका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय लडसरियाले पार्क निर्माणले बैङ्क, बीमा र अन्य कर्पोरेट कार्यालयका लागि सहयोग हुने बताए । यो प्रोजेक्ट यूएस ग्रीन बिल्डिङ काउन्सिल एलईईडी सर्टिफिकेटका लागि दर्ता गरिएको छ ।
नेपाल बैङ्कको बुर्तिवाङ शाखा पुनःस्थापना हुने
चैत १२, काठमाडौं(अस) । माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको नेपाल बैङ्क लिमिटेड बागलुङ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्र बुर्तिवाङमा पुनस्थापित हुने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सेवा र सुविधा दिने उद्देश्यले खुलेको नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्क लिमिटेड बागलुङ जिल्लाको बुर्तिवाङ बजारमा राख्ने राष्ट्र बैङ्कले निर्णयगरेपछि चैत महीनाको चौथो सातादेखि शाखा खोली काम शुरू गर्नको लागि अन्तिम तयारी भइरहेको नेपाल बैङ्क लिमिटेड बागलुङ शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रदीप पाठकले बताए । नेपाल बैङ्कको पुनस्थापनापछि बागलुङ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको १६ गाविस र गुल्मी जिल्लाका ४ गाविसका जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । अहिले सो क्षेत्रमा सरकारी बैङ्क नहुँदा वित्तीय कारोबारका लागि सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सरकारले बुर्तिवाङ क्षेत्रमा नेपाल बैङ्कको शाखा खोल्ने निर्णयगरेर बैङ्कका लागि शाखा प्रबन्धकसमेत खटाएर घर खोज्ने कामसमेत गरिसकेको छ । शान्ति प्रक्रियासँगै माओवादी सरकारमा आइसकेपछि द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैङ्क पुनस्थापना गर्न त्यस क्षेत्रका जनताले माग गर्दै आएका थिए ।
तत्काल काममा फर्कन तीन ट्रेड युनियनद्वारा आग्रह
तीन ठूला ट्रेड युनियनले व्यवसायीसँग तलब भत्तालगायत विषयमा सहमति भएकाले मजदूरहरुलाई तत्काल काममा र्फकन आग्रह गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट) अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस-स्वतन्त्रद्वारा शनिवार संयुक्त रूपमा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सहमतिको अपव्याख्यामा नपर्न मजदूरलाई आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा ३ महीनादेखि जारी वार्ताको परिमाण स्वरूप नै चैत १० गतेको सहमति भएको बताएको छ । मजदूरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा रू. १५ सय, दैनिक ज्यालामा रू. ३६ वृद्धि भएको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रू. ३१ सय, महँगीभत्ता रू. ३ हजार गरी रू. ६ हजार १ सय र दैनिक पारिश्रमिक रू. २ सय २६ भएको बताएको छ ।
रोजगार दाताहरूले स्थाईलाई मात्र नभई अस्थाई, करार, पिसरेट, ज्यालादारीलगायत श्रमिकलाई उपदान सञ्चयकोषको व्यवस्थाका लागि २० प्रतिशत रकम थप गर्न र सोका लागि कानून बनाउन सहमति भएको हो । सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले योगदान गर्ने प्रतिबद्धता यो अवधिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको युनियनहरूले बताएका छन् । हालसम्म स्थाई कामदारको सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाबापत १ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत कट्टा हुने गरेकोमा सोभन्दा थप रकम तलबबाट कट्टा नहुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ४ वर्षको औद्योगिक शान्तिवर्षको अवस्थामा समेत पुनः न्यूनतम ज्याला वृद्धि हुने र कानून बमोजिम प्रतिष्ठानस्तरमा हुने सामूहिक सौदावाजी र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी हडताल गर्ने अधिकारसमेत सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा बताइएकोछ छ ।
मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालको उद्घाटन
मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालको नयाँ भवनको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उद्घाटन गरेका छन् । काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित ठूलो भर्याङमा अस्पताल बन्न लागेको छ । भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा आएको बताए । सार्वजनिक, सहकारी र निजीक्षेत्र गरी तीनप्रकारका आर्थिक खम्बालाई बलियो बनाएर मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
अस्पताल नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित छ । सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले १ अर्ब ५ करोड २८ लाख ८९ हजार ५३ रुपैयाँको लागतमा ३ लाख ३९ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल ओगट्ने ९ सय शैयाको अस्पताल निर्माण हुन लागेको जानकारी दिए । उनले १ वर्षभित्र ३ सय शैया सञ्चालनमा आउने र साढे दुई वर्षभित्र ९ सय शैया तयार हुने बताए । प्रधानमन्त्री खनालले शनिवार सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकमा आयोजित सोही सहकारीको पाँचौ साधारणसभाको समेत उद्घाटन गरेका थिए ।
विद्युत् व्यवसायी महासङ्घको साधारणसभा
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २ वर्षभित्र दैनिक लोडशेडिङको समय १२ घण्टा घटाउन ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको बताए । उनले भने, ‘सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यबाट विद्युत् उत्पादन बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले विद्युत् उत्पादन कम र माग अत्यधिक भएकाले नै लोडशेडिङको समय दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले लोडशेडिङका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए । महासङ्घले साधारणसभामा सरकारले ल्याएको ऊर्जा सङ्कटकालमार्फत सीएफएल चिममा दिने भनेको भन्सार छूटको स्वागत गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्नुको कारण राजनैतिक खिचातानी :श्रेष्ठ
पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले राजनैतिक खिचातानीका कारण देशमा अर्थतन्त्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । इन्षिटच्युट अफ बैङ्किङ एण्ड म्यानेजमेण्ट स्टडिज (आईबी एण्ड एमएस)ले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको वर्तमान व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘हरेक ठाउँमा हाबी भएको राजनीतिले देश विकासमा असर पुर्‍याइरहेको छ’ उनले भने । अन्य कुरामा वैचारिक विविधता भए पनि इकोनोमिक एजेण्डामा एक हुन सबै दलहरूलाई उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा आईबी एण्ड एमएसका विद्यार्थीलाई श्रेष्ठले आफ्नो सफलताका अनुभवहरू सुनाएका थिए ।
बाँसबारी क्लबलाई महिन्द्राको सहयोग
बाँसबारी क्लबलाई महिन्द्राले सहयोग गर्ने भएको छ । महिन्द्रा गाडी तथा ट्रयाक्टरहरूको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालि र क्लबबीच हालै सहयोगका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि क्लबको ‘महिन्द्रा बाँसबारी फुटबल क्लब’ रहनेछ । यो सम्झौताले आगामी २ वर्षसम्म निरन्तरता पाउने बताइएको छ । महिन्द्राको सहयोगबाट यस क्लब र यसका खेलाडीहरूलाई हौसला मिल्ने र फूटबल खेलमा अझ सहयोग पुग्ने आशा तथा विश्वास क्लबले गरेको छ ।
साङ्ग्रिलाको लघुवित्त कर्जा सेवा
साङ्ग्रिला विकास बैङ्कले लघुवित्त कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । लघुवित्त सेवा लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई बैङ्कले विनाधितो सामूहिक जमानीमा ६० हजारसम्म, आवश्यक धितो लिई लघु उद्यम कर्जा १ लाख ५० हजारसम्म, न्यून लागतका घरकर्जा रू. ४ लाख, कृषि कर्जा रू. १ लाख ५० हजार तथा वैदेशिक रोजगार कर्जामा १ लाख ५० हजारसम्म लगानी गरिने बताएको छ । बैङ्कको लघुवित्त कर्जा विभाग रानीपौवामा रहेको छ ।
क्षेत्रीयस्तरको यस बैङ्कले आफ्ना १२ शाखामार्फत बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आफ्ना सम्पूर्ण शाखाहरूबाट एबीबीएस सुविधा, एसएमस बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैङ्कले प्रधान कार्यालय न्यूरोड, हेटौंडा, बुटवल, पोखराको बिरौटा र रामबजारबाट आफ्नै मेशिन जडान गरी एटीएम सेवासमेत सञ्चालन गरेको छ । प्रधान कार्यालयमा ३ सय ६५ दिने बैङ्किङ सेवालगायत सुनचाँदी कर्जाको सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
‘ऐपिल स्टप मौस्’ हेयर रिमुभर नेपाली बजारमा
बहुराष्ट्रिय कम्पनी आईजीआईएद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा उत्पादित ‘ऐपिल स्टप मौस्’ हेयर रिमुभर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । उक्त रिमुभरलाई नेपाली बजारमा स्काई ब्राण्ड नेपालले भित्र्याएको हो । स्काई ब्राण्ड नेपालका लागि एपिल स्टम मौस्को आधिकारिक विक्रेता भएको छ ।
२ सय मिलिलिटरको क्यानमा उपलब्ध उक्त रिमुभरले ७ देखि १० मिनेटमै शरीरमा भएका अनावश्यक रौंलाई हटाउने विक्रेता कम्पनीको दाबी छ । यसले विना दुखावट शरीरमा भएका रौंलाई सजिलै हटाउनुका साथै शरीरलाई सफा, मुलायम तथा सुगन्धित राख्ने स्काई ब्राण्डका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले बताए । नेपाली बजारमा ऐपिल स्टप मौस्को मूल्य १ हजार ७ सय ९ ५ रूपैयाँ रहेको छ । विक्रेता कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख ७ गतेसम्मका लागि भने उक्त रिमुभर १ हजार ५ सय रूपैयाँमा उपलब्ध गराउने बताएको छ । हाल काठमाडौं खिचापोखरीस्थित महालक्ष्मी कम्प्लेक्स र पोखराको चिप्लेढुङ्गाको मल्ल इम्पोरियममा उक्त रिमुभर उपलब्ध रहेको छ । छिट्टै नै ‘ऐपिल स्टप मौस्’ नेपालका प्रमुख शहरका कस्मेटिक पसल, डिपार्टमेण्टल स्टोर तथा ब्युटीपार्लरहरूमा उपलब्ध गराउने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
भारत-नेपाल टेली ओन्को केयर स्थापना
सम्झना ल्याबोरटोरी क्लिनिक प्रालि, काठमाडौं र राजीब गान्धी क्यान्सर इन्षिटच्युट एण्ड रिसच सेण्टर, दिल्लीको सहकार्यमा भारत-नेपाल टेली ओन्को केयर (इण्टोक) स्थापना भएको छ । शुक्रवार होटल याक एण्ड यतीमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन जयदीप मजुम्दारले उक्त इण्टोक सेवाको उद्घाटन गरे ।
इण्टोकको स्थापनापछि टेलिमिडिया लिङ्कमार्फत नेपाली जनताले राजीब गान्धी क्यान्सर इन्षिटच्युटका विशेषज्ञहरूबाट परामर्श तथा उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । टेलिमिडिया लिङ्कका माध्यमबाट नेपाली जनताले कम खर्चमा प्रभावशाली सेवा लिन सक्ने राजीब गान्धी क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ डा. एके देवानले बताए । ओन्को सेवा हाल थापाथली स्थित ब्लुबर्ड मलमा सञ्चालित रहेको जानकारी गराइएको छ । यसबाट प्राप्त केही रकम क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरिने सम्झना ल्याबोरटोरीले बताएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालका वरिष्ठ अङ्कोलोजिष्ट प्राडा. अञ्जनीकुमार शर्मालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । साथै वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू प्राडा. तारा मानन्धर र डा. मदनकुमार पियालाई पनि सम्मान गरिएका थियो ।
जेबिल्सको निक्षेप बीमा
जेबिल्स फाइनान्सले कर्जा सुरक्षण निगमसँग रू. २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैङ्कको निर्देशन बमोजिम फाइनान्सले निक्षेपको बीमा गरेको हो । निक्षेप बीमासम्बन्धी सम्झौतामा फाइनान्सका प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मीलाल नकर्मी र निगमका तर्फबाट भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पर्वतमा चैतेदशैं मेला हुने
पर्वतको भुकताङ्लेमा चैतेदशैं पर्वको अवसर पारेर पाँचदिने मेलाको आयोजना गरिने भएको छ । भुकताङ्ले गाविसमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी यस क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय पिपलचौतारी युवा क्लबको आयोजनामा चैत्र २८ देखि वैशाख २ गतेसम्म मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदयात्राको पवेशद्वारका रूपमा रहेकाले मेलाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । भुकताङ्ले गाविसमा भएका पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक स्थलको प्रचारप्रसार गर्न मेला फलदायी हुने आयोजक समितिका सचिव जगतबहादुर मल्लले बताए । भुकमा महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थल भैरवस्थान र भुरुङकोटबाट हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र भएर दैनिक सयौं पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने घारेपानी, पुनहिल र घान्द्रुक तथा अन्नपूर्ण वेस क्याम्पमा जाने गर्दछन् ।